Ngwa-ngwa mmepụta nke Industrial Components | Mepụta - Mepụtaproto Tech Tech, Ltd.
Ngwaahịa / Mmepụta ngwaahịa
Prototyping bụ ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ usoro mmepe ngwaahịa ọhụụ. Ma ebumnuche bụ ịchọpụta ohere ọhụụ ma ọ bụ mezie azịza ndị dị ugbu a, ịmalite ịmalite ịmalite ọrụ nwere ike ịbụ ngwa ọrụ bara uru.
CreateProto bụ onye tụkwasịrị obi na ọrụ mmepe ngwaahịa ngwaahịa ụwa. Anyị otu nke ukwuu ahụmahụ injinia enyerela obere, ọkara, na enterprise larịị ahịa gbanwee ha ngwaahịa echiche n'ime a eziokwu site n'inye enweghị atụ prototyping na n'ichepụta.
Prototype-to-Production maka Usoro Mmepụta Ngwaahịa
Tedị Mgbakwunye na Nhazi Ngwaahịa
Ebumnuche azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ agbanweela ka ọ "zaghachi ngwa ngwa na ngwa ahịa", yana oge dị mkpa karịa ihe niile. N'okpuru ihe a choro, asọmpi nke ụlọ ọrụ dị na otu esi emepụta prototype ozugbo enwere ike iji nyochaa atụmatụ nke ndị mmepe ngwaahịa, ma mee ka ngwaahịa ọhụrụ gaa ahịa ngwa ngwa.
Mmepụta ngwaahịa na mbụ ogbo bụ ogologo na gbagwojuru anya ruo mgbe imewe ka prototype development. Agbanyeghị, ọkwa a dị ezigbo mkpa tupu ịkwaga n'ọtụtụ nrụpụta. N'ezie, a pụrụ ikwenye ụdị ngwaahịa niile na usoro mmepe na mmepe niile, gụnyere ụdị echiche, ngosipụta ngosi, usoro ọrụ, injinia prototypes na obere nrụpụta. Ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị nke usoro ihe atụ nwere ike ime ka usoro mmepe ngwaahịa ọhụrụ dị ike ma dị irè, na-ebelata ohere nke ọdịda.
Nkọwapụta Ngwaahịa Ngwaahịa na Usoro Mmepe
Ghọta ma chọpụta echiche. Mee ngwaahịa echiche ka ị na-ejikwa ya rụọ ọrụ mgbe ị na-arụ ọrụ iji gosipụta nkọwa dị oke mkpa ma ghọta nke ọma ebumnuche ahụ site na ihe ngosipụta-echiche.
Na-agwa ndị ọzọ okwu nke ọma. Presentationdị ngosi ihe ngosi na-enye ndị na-emepụta ikike ịkekọrịta echiche ha na ndị ọrụ ibe, ndị ahịa, na ndị nwere oke aka iji kwado nzaghachi doro anya, na-arụ ọrụ.
Design iterations na-agbanwe agbanwe. A pụrụ iji mmepe ngosipụta nke arụmọrụ na-arụ ọrụ iji nwalee imepụta iterations ma mezuo arụmọrụ gị. Mee ka a chọpụta ma dozie nsogbu ọ bụla tupu ị banye na ngwaahịa ikpeazụ, ma belata nsogbu azụmaahịa.
Jiri obi ike gaa mmepụta zuru ezu. Mepụta ihe injinia nke dabara na ngwaahịa ikpeazụ na-eme ka ọ dị mfe nyocha njirimara, injinia, na nrụpụta ihe na usoro mmepe tupu itinye ego na ngwa ọrụ dị oke ọnụ ma tinye ha na mmepụta.
Efu-irè ala olu n'ichepụta. Ngwa ngwa ngwa na ngwa obere olu dị ala ga-enwe ike idozi ọdịiche dị n'etiti prototype na mmepụta, ma mee ka ngwaahịa gị gaa ahịa ngwa ngwa na ọnụ ọnụ ọnụ.
IkeProto na-enye nkwado zuru ezu site na Usoro Niile
CreateProto nọ na-arara nye ịnye ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na usoro mmepụta ngwa ngwa maka ụdị ndụ niile nke ụlọ ọrụ gafee ọrụ, n'agbanyeghị azụmaahịa na ngwaahịa ndị ahịa ma ọ bụ site na ngwa na akụrụngwa na ngwaahịa dijitalụ na ngwa ụlọ. Pọtụfoliyo anyị n'ichepụta ngwaahịa na-ahụ maka imepụta ihe ziri ezi, na-ezute nnwale na nkwenye, n'ikpeazụ na-eweta ọganiihu ụlọ ọrụ.
N'otu oge ahụ, anyị na-agbasi mbọ ike ịbụ ezigbo onye ọrụ nrụpụta ọrụ zuru oke zuru oke na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị ipuiche a dịgasị iche iche nke prototyping na n'ichepụta technology, na-enye CNC machining, 3D obibi akwụkwọ, agụụ mgbatị, ngwa ngwa tooling, na ala olu injection ịkpụzi, nke ịnọgide na-enwe a asọmpi onu na otutu ọrụ na nkà dị ukwuu-arụ ọrụ ego. Anyị ga - arụkọ ọrụ ọnụ - yana gị - site na usoro ọ bụla nke ngwaahịa na usoro mmepe ruo na mmepụta ngwaahịa.
Ngwa Prototype maka Mmepụta Ngwaahịa Na Niile Ọrụ
Akụrụngwa & Ngwaọrụ Prototyping
MepụtaProto na-eme ọtụtụ ụdị ngwaahịa maka ngwa na ngwa eji ihe eji arụ ọrụ injinịa na ọla n'ọtụtụ ngwa. Na otu ihe dị ka ngwaahịa ikpeazụ, ihe ngosi na-eme ka arụ ọrụ arụ ọrụ, njirimara eletriki, nguzogide kemịkalụ, akụrụngwa ọkụ, na ule ndụ nke njedebe iji ngwaahịa. Ka i wee nwee ike ịghọta nke ọma otu akụkụ ma ọ bụ nzukọ ga-esi rụọ ọrụ mgbe edobere ya na gburugburu ụwa nke na-anọchite anya ihe ọ ga-ahụ na ngwa ya.
Nkà na ụzụ anyị kachasị elu na nkà na-enye ndị ọkachamara anyị ohere ịmepụta ihe ngosi dị mgbagwoju anya nke usoro ọrụ iji chọpụta ụdị ma dabara adaba, na-ahụ na akụkụ niile dabara na mgbakọ maka ngwa dị oke ọnụ na akụrụngwa ọtụtụ. Si prototyping ka n'ichepụta, anyị hụ na arụmọrụ nke gị omenala e ngwá na akụrụngwa osobo gị ezigbo mkpa na atụmanya.
Tzụ ahịa & Office Prototyping
Emepụta ikike ikike ịmepụta ihe nkeProto dabara adaba maka ndị nrụpụta azụmaahịa na ọfịs (ngwaahịa OA) nwere akụrụngwa arụpụtara na nkọwa gị. Ihe omuma a ga-eji ikwuputa ihe nile nke ngwaahịa a, tinyere ikike ziri ezi maka ichikota akuku, ichota mmezi ihe na ihe di iche iche di iche iche.
Anyị nwere ike iji ahụmịhe anyị na teknụzụ na ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa iji nye ndụmọdụ kachasị mma gbasara akụrụngwa dịka akụrụngwa, usoro, ndidi, na ịkọ nsogbu nwere ike inyere aka igbochi nsogbu injinia gị. Site na ndị injinia ọkachamara na ndị njikwa ọrụ, CreateProto enweghị atụ na ntinye ngwaahịa ma na-ejigide mmekorita na-enweghị ntụpọ na ndị ahịa, nwee ike inye nkwado na-aga n'ihu na mmepe ngwaahịa ahụ.
Digital & Ngwa Prototyping
Na asọmpi n'ji ngwaahịa ubi, ihe niile anyị na-eme ebe a na CreateProto na-elekwasị anya na-enye nke kacha mma mma prototyping na ụlọ ọrụ - na oge na-eri. CreateProto na-emepụta ụdị ngosi ngosi dị elu dị ka ezigbo ngwaahịa. Modelsdị ndị a dị mma maka iji na-elekwasị anya, otu azụmahịa na ahịa na ahịa ndị ọzọ.
Site na kọmputa gaa na ekwentị mkpanaaka, TV setịpụrụ na ikuku, CreateProto nwere ihe karịrị afọ 20 na ahụmịhe ngwaahịa ngwaahịa ngwa ngwa. Anyị nwere ike imeghachi omume ọ bụla mmepe mmepe chọrọ na ụbọchị. Anyị na-arụ ọrụ a na-akwụsị nkwado si prototype machining ka elu gụchara. Mee ngwa ngwa kọwaa ngwaahịa n'oge niile nke usoro nhazi maka nyocha anya nke atụmatụ, ọdịdị, arụmọrụ na ọdịdị na mmetụta niile.
Anyị nwere ọtụtụ ikike n'ime ọrụ anyị na usoro enyere anyị aka Product Development Prototype ụlọ ọrụ.
CNC Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, Otito Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Fast Prototyping,